ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem]
1 ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 10th November 2009, 5:25 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-05-08
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 92
မှ ဖိုင်တစ်ခုကို ဒေါင်းလုပ််လုပ်တာ All download limits exceeded from your IP (xxx.xx.xxx.x) ဆိုပြီးပြပါတယ်
ဒေါင်းလို့မရပါ။ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးတာပါ။
2 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 10th November 2009, 8:47 pm
တစ်ချို့site ကဒေါင်းလုတ်လုပ်တာတွေဟာ...ip range တစ်ခုအတွင်းမှာ.... ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲဒေါင်း
လို ့ရမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်....ဒါကြောင့်မို ့လို ့သူ ့ရဲ့ip အတွင်းမှာ limit ပြည့်သွားရင်..
ဒေါင်းလို ့လုပ်လို ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး...ဒါမှလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်... Freedom ဒါမှမဟုတ် Ultra နဲ ့
ကျော်ပါ...ဒါမှမဟုတ်.. vtunnel.com ctunnel.com မှကျော်ပါ... Freedom နဲ့Ultra ကဒေါင်းလုတ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်...စိတ်ချရပါလိမ့်မယ်.....
3 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 5th February 2010, 3:03 pm
တည်နေရာ : နတ္ျပည္
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-11-25
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 56
cookie ဖျက် ပြီ ၄ ခါလောက် ကြိုး စား ကြည့်ပါလား
4 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 30th April 2010, 6:55 pm
လုပ်လို့ မရပါဘူးဗျာ။ အဲဒီတော့ မဒေါင်းတော့ရင် ပြီးတာပဲ [You must be registered and logged in to see this image.]
ကျွန်တော့်မေးလ်ထဲကို '' ညစ်ညမ်းပုံများမတင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံ '' ဆိုပြီး မေးလ်တစ်စောင် တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီမှာ မင်ဘာမဝင်တဲ့အကြောင်း၊ မင်ဘာဝင်ရင်တောင် အဲဒီလိုပုံမျိုးတွေ မတင်ဘူးဆိုတာ Reply နဲ့ စာပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Mail Delivery Subsystem ဆိုပြီး ပြန်လာပါတယ်။ နောက်တစ်စောင် ထပ်ပို့လည်း ဒီလိုပဲ စာပြန်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်မေးလ်မှာရှာကြည့်တော့ ကျွန်တော့်အကောင့်နဲ့ Password ကို ပို့ထားတာတွေ့တော့ အဲဒီ password နဲ့ ၀င်ကြည့်တော့လည်း ၀င်လို့မရ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ မသိပေမယ့် ဒီကိစ္စကို မကျေနပ်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်မှ မလုပ်တဲ့ဟာကြီးကို ။ Mad
ကျွန်တော့်ဆီပို့လိုက်တဲ့မေးလ်ကို အောက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
ညစ်ညမ်း ပုံ များ မတင် ရန် မေတ္တာရပ် ခံ ပါ တယ် ဗျာ
ဒီ ဂရုလေး ထဲ မှ ညီ မ အမ အရွယ် မန် ဘာ ညီ အကို မောင် နှမ သူ ငယ် ချင်း များ စွာ ရှိ နေ ပါ တယ် ထို့ ကြောင့် မန် ဘာများ အ ချင်း ချင်း ရေ ရှည် ချစ် ခင် စေ ရန် မျှော် မှန်း
ရျ် ညစ် ညမ်းး ပုံ များ မ တင် ရန် ပြော ကြား လို ပါ တယ်
တင ်ခဲ့ သော ပုံ တွေ ကို လဲ ဖျက် ပီး ပါ ပီ အက် မင် များ မှ မ မြင် မ တွေ့ ခဲ့ လို့ နောက် ကျ ခဲ့ ရင် လဲ မန် ဘာ များ မှ အ ကြောင်း ကြား ပေး စေ လို ပါ တယ်ဗျာ
Administrator of ShweKyunThar sent you this message. To visit the group: [You must be registered and logged in to see this link.]
ကျွန်တော့်ဆီပို့ထားသော password ကို အောက်မှာရေးထားပါတယ်။
Welcome to Grou.ps - thanks for signing up. Here are your credentials:
5 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 30th April 2010, 10:21 pm
the best thing is "Login to that forum (even you don't want.) and Delete your account or Unsubscribe from the mail delivery system."
6 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 2nd May 2010, 10:17 am
Sign in လုပ်လို့ မရဘူးခင်ဗျ။
Ooops... There were some errors! Please try again. ဆိုပြီး Error ပြနေတယ်။
7 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 2nd May 2010, 10:38 am
SilentHill wrote: ကျွန်တော့်မေးလ်ထဲကို '' ညစ်ညမ်းပုံများမတင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံ '' ဆိုပြီး မေးလ်တစ်စောင် တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီမှာ မင်ဘာမဝင်တဲ့အကြောင်း၊ မင်ဘာဝင်ရင်တောင် အဲဒီလိုပုံမျိုးတွေ မတင်ဘူးဆိုတာ Reply နဲ့ စာပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Mail Delivery Subsystem ဆိုပြီး ပြန်လာပါတယ်။ နောက်တစ်စောင် ထပ်ပို့လည်း ဒီလိုပဲ စာပြန်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်မေးလ်မှာရှာကြည့်တော့ ကျွန်တော့်အကောင့်နဲ့ Password ကို ပို့ထားတာတွေ့တော့ အဲဒီ password နဲ့ ၀င်ကြည့်တော့လည်း ၀င်လို့မရ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ မသိပေမယ့် ဒီကိစ္စကို မကျေနပ်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်မှ မလုပ်တဲ့ဟာကြီးကို ။
ဟုတ်တယ်....... ကျနော်လဲ ဖြစ်ဘူးတယ်...... အဲဒီ site မှာလဲ ကျနော် register မလုပ်ထားဘူးဗျ.... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတော့ မသိဘူး... သိချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်..... ကျနော် mail ကို အဲဒီ site က ဘယ် က နေရသွားတာလဲ..... ပြီးတော့ လုပ်ရက်တယ် ဗျာ.... ညစ်ညမ်းပုံတွေ မတင်ပါနဲ့ တဲ့.... မသိရင်တော့ water ဆိုတဲ့ ကောင် က porn မင်းသားကျ နေတာပဲ [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 3rd May 2010, 6:32 pm
ကြည့်ရတာ မင်ဘာမလုပ်ရင်ပို့တယ်နဲ့တူတယ် ဆိုက်ကမိုက်တယ်နော်။
9 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 6th May 2010, 6:13 pm
water ရေ။ အဲဒိစာ ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘာတွေဖြစ်သေးလဲ။ အဲဒီဆိုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ။ စာတွေထပ်ပို့သေးလား။
10 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 6th May 2010, 9:30 pm
site နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘာစာမှတော့ ထက်မပို့တော့ဘူးဗျ... ကျနော် လဲ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ သိချင်တယ်... အဖြေရှာနေတာကြာ ပြီ.... ခေါင်းစားတာပဲ အဖတ်တင်တယ်.... [You must be registered and logged in to see this image.]
11 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem] on 7th May 2010, 1:34 pm
[You must be registered and logged in to see this image.]??? [You must be registered and logged in to see this link.] ??? ??? [You must be registered and logged in to see this link.]
???????? ???????? ???????????????????? ??????..
???????????????????????????? ??????????????????..???????????????? ???????????????????????? ...
[You must be registered and logged in to see this link.] ????????? Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
???????????????? .. ????? ??????????????????..
??????????????? ??????????????? ???????? ????????????????????????????????..
??? Profile ?
???????? November, 30, 1999
Gender ? Mail
Nationality ? Myanmar (Burma)
?????????????? Command ??????????????? " ?????????" ????
??????? ??????????????????? ??????? ????????????????....
???????? - ????????????????????????..
12 Re: ကျွန်တော်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအခက်အခဲများ [Problem]